Mahakasika ny tetikasa PADAP - PADAP
Ny tetikasa PADAP na Tetikasa Fambolena Maharitra Amin’ny Alalan’ny Fanatontosana ny Tontolo dia tetikasa tantanan’ny Ministeran’ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono na ny MPAE. Ny famatsiam-bola dia omen’ny governemantan’ny Madagasikara, ny fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny fampandrosoana na (IDA), ny masoivoho Frantsay fampandrosoana (AFD) ny fitaovana momban’ny tontolo iainana manerantany (EFM) ary ny famantsiam-bola karbonina.
Nampiharina tamin’ny toerana dimy : Andapa, Sonierana Ivongo, Iazafo, Bealanana ary Marovoay ny tetikasa PADAP. Mitentina USD 78,6 tapitrisa dolara ny famatsiana ho an’ity tetikasa ity. Mikendry ny hampihenana ny fahasimban’ny harena voaanahary, indrindra ny rano, ny tany sy ny tontolo iainana amin’ny alalàn’ny fampiasana ny fomba fijery ny tontolo izy ireo. Ny tetikasa PADAP koa dia mikendry ho loharanom-bola maharitra ho an’ireo tantsaha noho ny harena an-tanety, ny ala ary ny agroforestières.
Na dia tetikasa fambolena fotsiny aza ny PADAP dia tsy irery ny MPAE amin’ny fanatanterahana azy. Ity farany dia tena mandray soa avy amin’ny fanampiana sarobidin’ny mpiara-miombon’antoka, toy ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana, ny Ekolojia ary ny Ala (MEEF) ary ny Minisiteran’ny Rano, Fanadiovana ary Fahadiovana (MEAH). Ny andrim-panjakana voalohany voalaza dia manome tanana amin’ny fametrahana sy fanatanterahana ny fandaharan’asa momba ny tontolo iainana, ary ny faharoa kosa dia tompon’andraikitra amin’ny fitantanana ny loharanon-drano.